Hospital lalao ho an'ny ankizivavy - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Hospital lalao ho an'ny ankizivavy
ny ankizivavy nahafinaritra foana milalao ao amin'ny hopitaly, na dia tsy nisy intsony mahafinaritra virtoaly. Dia niova fo kilalao ny marary, ka mahatonga azy ireo tsindrona, dressings, voasoratra pilina sy ny potions lahateny ho an'ny tsy-fanarahana am-pandriana fitsaharana. Ankehitriny dia tsy maimaim-poana amin'ny aterineto lalao Hopitaly hanohy ny hilalao, fa ny mahaliana kokoa fitsipika. Ny fahaizana manokatra be, fa kosa afaka mampiasa ny boky ara-tanana dia tena tena scalpels sy fitaovana fanongotana volo, stethoscope sy fitaovana hafa.
Lalao Toeram-pitsaboana tamin'ny Category:
Games hataon'ny nify
Ny tsara indrindra Hospital lalao ho an'ny ankizivavy
Ny mpandahateny eo amin'ny latabatra fandidiana
Amateur Ilay Mpandidy 2
Avy ratsy ho tsara tarehy
Miresaka Tom taorian'ny ratra
Hetsika an-kianjan'ny tempoly ny Loza Hanjo
Angela tonga reny
Peppa Kisoa sy ny fikarakarana nify
Aretina kely Hesel
Peppa kisoa asan'ny fanahy
Virtual Surgery: sofina fandidiana
Barbie ny fandraisana tao amin'ny dokotera
Peppa Kisoa. Ny fandehanana any amin'ny mpitsabo nify
Hand fandidiana 2
Faharatrana Peppa kisoa
Takariva iny: Bevohoka Pony
Mahafatifaty Farm Hospital
Peppa Kisoa mpandidy
Pou Tsipìka Dr.
Baby Hazel: Eye Fitsaboana
Baby Hazel - Hospital
Fandidiana vavony Angela
SpongeBob: Ny fitsaboana ny may
Very saina Hopitaly 2
Lalamby Surfer sy Dr. tongony 2
Mangatsiaka Heart: fandidiana atidoha Elsa
Vonjeo ny Rabbit
Kid Talking Tom: momba ny maso
Zavatra izao in nify fandidiana
Elsa. Caesarean section
Metro surfers: Fitsaboana ny tongotra
Dental olana ao ny zaza Monster
Bevohoka Angela tany amin'ny hopitaly
Lalamby Surfers: Dokotera itondran'i sandry
Pou ao anatin'ny fiara mpitondra marary
Miresaka Angela: Operation
Dora: milalao traikefa
Pretty Soavaly Hospital
Gilasy hanamboarana ny fiara
Baby Dasha: Dental olana
Dr. Makfins: Fifaliana Lambi
Ny fitsidihana ny mpitsabo nify avy Monster Avo
Cabvey Cerf: ny fitsaboana ny zaza
Doctor Teddy tao amin'ny mpitsabo nify
Fikarakarana ny Talking Ginger
Fandidiana mba hanesorana appendetsita
Ny kapiteny tao amin'ny mpitsabo nify
Vonjy taitra chatty Angela
Slipper mpitsabo nify
Talking Angela: Ny fandehanana any amin'ny mpitsabo nify
Dental olana metro Surf
Bevohoka Rapunzel in fiara mpitondra marary
Fihetsika izao: appendicite fandidiana
Miasa amin'ny traingoy
Cesarean teraka alika
Virtual Surgery: Ny hetsika eo amin'ny hoditra
Toeram-pitsaboana fitsaboina momba ny biby
Dadabe Noely tany amin'ny mpitsabo nify
Farany Hospital lalao ho an'ny ankizivavy
Dokotera ny maso
Fitsaboana ny tongotra
911 Dokotera Ambulance
Famehana vonjy taitra amin'ny Santa
Fandidiana mahatsikaiky mahatsikaiky
Famerenana amin'ny laoniny Ice Ice Home
Fitsaboana ny Ice Queen Back
Efitrano vonjy maika amin'ny hopitaly
Dokotera Tongotra Exotic
Ambulance zazavavy milamina ho an'ny Superhero
Fitsaboana zazavavy voafintina
Fihaonana kiraro mpitsabo nify
Dokotera Mini Tongue
Fikaonan'ny fitsangatsanganana Fenosento Super
Dokotera ny tendan'ny tovovavy
Famerenana amin'ny laoniny ny tovovavy voafaritra
Fitsaboana alahelo zazakely
Free lalao an-tserasera hopitaly no hilaza aminao ny dikan'ny hoe ho dokotera, ary mamonjy aina
Lalao Online Rehetra Hospital lalao ho an'ny ankizivavy
Ary koa, runny orona, na ratsy kohaka sy ny tazo manelingelina marary andoha. Hooray, tsy afaka mandeha any an-tsekoly mihitsy, ary ny zo hijanona ao an-trano! Efa fantatrao ny fomba andro rehetra nandry teo am-pandriana, mamaky boky, na milalao ny toerana tena lalao video. Neny manomana anao ny ron-kena matsiro, manolotra ny hameno ny vatana vaovao amin'ny fampiasana vitaminina ranom-boankazo sy ny toerana tena voa, po ny goodies. Fa inona moa izany eo an-tànany? Tena mangidy fanafody fa tsy mamy mofomamy sy be ranony vao vitamina? Nefa izy tsy iray – Ao ambadiky ny olona ao amin'ny akanjo fotsy. Doctor!? Oh tsia, na dia izany! Ary tsy maintsy ho korontam-bato toy izany andro mahafinaritra. Ary manomboka – miaina, fa tsy miaina, maneho fiteny, ny hatsiaka fitaovana fijerena hafanana eo amin'ny armpit, ny fanendrena ny tsindrona, takelaka, raokandro infusions sy inhalations. Oh, dia tsara kokoa ny hipetraka ao amin'ny sekoly mankaleo simika kilasy. Tsy maintsy hongotantsika na ratsy, mafy sy matsatso. Ary ny tsara kokoa mba hiarovana ny fahasalamana dia OK, fa saika naratra nandritra ny lalao ho an'ny zazavavy Hopitaly.
miezaka amin'ny akanjo fotsy hilalao Hopitaly
Ianao tonga dokotera, ary ho fitiliana ny marary zavatra izay heverina ho afaka mba hanamaivanana ny fijaliana. Ahoana, dia manontany hoe: afaka hanamaivana ny maharary tsindrona lafarinina nanam-paharetana? Izy ary dia ratsy, nefa mbola fampijaliana, fampijaliana. Aleo Used tanana, stroked, tsaboina matsiro, dia nanambara ny tantara, na mbola tsara kokoa manome ny tantara an-tsary sy sarimihetsika. &Nbsp; Fa fanafody toa tsy tafiditra ao ny hevitry ny manam-paharetana sy tsy manaiky ny fitsaboana malefaka. ,
Fomba virtoaly fitsaboana
filalaovana lalao hopitaly maimaim-poana ianao dia ho afaka ny hanova tanteraka ny toe-javatra, ary mamorona zava-mahadomelina avy ao amin'ny caramel zava-mamy, sokola, Coca-Cola, Fanta, ranom-boankazo, mofomamy, voankazo sy voaroy. Raha manantena ny fanafody hanasitranana aretina rehetra, ny olona dia ho faly ny handeha ho any ny fanendrena ny halalinan-tsainy niverina ho any amin'ny fahasalamana tsara. Nandritra ny lalao ho an'ny toeram-pitsaboana maimaim-poana ianareo, dia ho nilahatra ny marary rehetra sy ny ela tsy mahazo fanampiana, ny kely hery izy ireo sisa. Raha toa ianao ka tsy nahita ny raikipohy matsiro fanafody, mampiasa zava-misy, fa ny zava-dehibe indrindra haingana, raha tsy te-hihaino ny fitarainany ny mpitsabo mpanampy: Dokotera, isika dia very ilay marary! Ao amin'ny toeram-piasana isika hanatsara ny fanasitranana ny marary dingana. Hopitaly lalao an-tserasera mahalala tranga sarotra maro izay mety hametraka anao mba tsy maintsy hanitsy dislocation, hametraka sokay amin'ny misokatra tapaka, hamiravira avy na hitsabo ny nify, manala appendicite, nafindra ny fo sy ny voa. Marary tsy mitovy – manam-paharetana sy tsy tena izy, fa ny fahafinaretana mba hiatrehana ny olona izay tsy manontany fanontaniana be loatra, ary tsy finaritra anareo amin'ny ny fitalahoany, izany hoe, ireo izay eo ambany fanatoranana.
fitsaboana biby fiompy
Ary mety ho ny olona, ​​fa tsy ny biby ihany koa. Ny lalao milalao Hopitaly, izay eo amin'ny fandraisana biby matevim, volo, miaraka amin'ny vazany dia vazan'ny sy ny valanoranony, raha ny fandehany ho fitsaboina momba ny biby hopitaly. Pets, indrisy, koa, indraindray mahazo marary sy mila fanampiana maika. Bandy tongotra, manala ny rava nify, asio tombo-kase ny ratra tamin'ny loko maitso.
Ny Romance ny mpiasa
amin'ny toeram-pitsaboana, misy ny zavatra mahafinaritra maro, fa ny asa dia tsy foana ny tena mahaliana. Ohatra, ianao manana tanora, tsara tarehy dokotera, ary ianao lohany taorian'ny-pitia aminy. Toa izy no manohana ho anao. Ny kely kokoa, ianao very ny lohanao, ary tsy maintsy manaiky, manoroka amin'ny fotoana rehetra. Ny teboka, mazava ho azy, ny tanora, fa aza adino izay misy anao, fa raha mahatratra ny lohan'ny lehiben'ny sampan-draharaha na ny dokotera, dia mety ho azon-doza. &Nbsp; Ny zaza ao am-boalohany matahotra ny handratra ny fahazazana. Tsy misy afa-taty aoriana aretina na ny mety ny simulation ho herinandro na roa aina avy ao amin'ny sekoly mankaleo, mandry ao an-trano amin'ny toerana tena boky, tantara an-tsary sy ny lalao video. Fa tanora ankizy ho an'ny olona ao amin'ny akanjo fotsy, ny fihetseham-po ratsy indrindra. Izy ireo ho azy ireo – ny fototry ny fanaintainana sy ny tahotra. Ary ho an 'ireo izay, fara fahakeliny, indray mandeha ny fotoana ela tao amin'ny hopitaly – dia ny fandrahonana ny fisarahana amin'ny ray aman-dreniny. Ary indraindray dia sarotra ny mahita teny mba hanazavana ny zanak'osy izay manao ny zavatra rehetra ho Azy tsara. Ary ny dokotera mikarakara ny fahasalamana sy tsara-panahy, fa tsy avy tao na dia teo aza fanafody fanafody matsatso sy tsy mahafinaritra fomba. &Nbsp; Raha toa ianao ka mamoy fo ny mampita ny zaza fahamarinana tsotra ireo, dia manolotra anareo fitaovana hafa. Aoka ho ny dokotera ny tenany. Noho ny fanampian'ny mareva-doko ny aterineto ankizy lalao momba ny fitsaboana. Avy amin'ny vazan-maneran-tambajotra, izahay dia nivory mba be dia be fanangonana ny lalao ho an'ny tovovavy momba ny hopitaly. Tsy vitan'ny. Play Lalao na te haka azy avy any amin'ny toerana ihany koa tsy ho anao mba ho tena tsy misy olana. ,